Ny iOS 13 dia mamoaka daty sy tsaho: Mitady ny hoavin'ny rafitra opera Apple
Nafahana i Apple iOS 12 miaraka amin'ny famoahana fitaovana vaovao: ny iPhone XR, ny iPhone Xs, Xs Max, ary ny Apple Watch Series 4. Ny rafitra fiasa vaovao dia evolisiona fa tsy revolisiona, ary ny fanatsarana ny ankamaroany dia manomboka eo amin'ny sehatry ny fampisehoana fa tsy ny fiovana mihodina sy miova.
Na dia teo aza ny famoahana vao haingana, efa tsikaritray ny tsaho mikasika ny fanoloana azy, ary miteny fa ny fisehon'ny karazan-tsarimihetsika sy ny famolavolan'ny fanovana dia efa tara-paharetana amin'ny iOS 12 ka ny Apple dia afaka mifantoka amin'ny olana momba ny fampisehoana sy ny olana. Tahaka ny hoe ny iOS 13 dia hahita ny fiovana goavana indrindra amin'ny rafitra fiasa hatramin'ny iOS 7.
Vakio àry ny famakiana ny fampahalalana rehetra, ny honohono ary ny vaovao, momba ny iOS 13.
iOS 13: Daty famoahana
Apple dia tena azo fantarina miaraka amin'ny fanambaràn'ny iOS sy ny famoahana ny fandaharam-potoana. Matetika izahay no maheno momba ny dikan-teny vaovao ao amin'ny iOS amin'ny WWDC, noho izany dia manantena ny fanambarana voalohany amin'ny volana jona 2019. Taorian'ny fananganana fanavaozana ho an'ny mpandrindra, ny vaovao farany ao amin'ny OS dia tonga amin'ny mpisehatra isan-karazany manoloana ireo iPhones vaovao ao Apple izay navoaka tamin'ny tapaky ny volana septambra. Noho izany ny fanakanana fiovàna goavana dia ho hitantsika ny iOS 13 tamin'ny Septambra 2019.
Bloomberg mpiara-miasa Mark Gurman dia nanambara fa ny iOS vaovao, izay novolavolaina teo ambanin'ny anarana hoe 'Yukon', dia hanana efijery an-tsokosoko tanteraka. Ny trano fonenana vaovao dia antsoina hoe 'tranokala' ary mifantoka amin'ny iPad, miaraka amin'ny tetika midika ho fampivoarana ny vokatra.
Ny fanambarana avy ao Gurman, izay manana rakitsoratra matanjaka amin'ny tondrak'i Apple, dia manamafy ihany koa ny tatitra iray teo aloha Axios. Ao anatin'izany tatitra izany dia nanamarika ihany koa i Axios fa hohavaozina ny iOS fakantsary, ny fizarana sy ny famoahana ny traikefa, ary koa ny UI ao anaty fiara sy ireo apps fototra toy ny mail.
Raha heverina fa ny portfolio dia alefa amin'ny iPhones, dia mety ho fiovan'ny fikandrana be indrindra indrindra hatramin'ny iOS 7 ny lalana mankany amin'ny 2013.
Gurman dia manana nanamafy ihany koa fa misy tetikasa iray ahafahana manohana fanohanana amin'ny sehatra iOS 13 sy macOS 10.15. Codenamed 'marzipan' tamin'ny fotoana iray ary niandrandra ny ampahany amin'ny iOS 12, ity fanohanana ny sehatra ity dia hamela ireo mpamorona fananganana apps miasa amin'ny iPhone, iPad sy Mac - fampivoarana vaovao mahavariana.
Ny fampivoarana ny fonosana Apple Pencil dia mety koa, raha nomena azy telo taona lasa izay. Tokony hivoaka ny vaovao fa mbola, tsy misy tsaho momba izany.
Farany, raha tafiditra ao anaty emojis ianao dia mety ho vintana amin'ny iOS 13, izay andrasana hampiditra maromaro vaovao. The Emoji Consortium Kandidà vao haingana no navoaka ho an'ny 2019, izay ahitana ny endrika manaitaitra, mpitarika alika, flamingo ary kibay. Apple dia mpikambana ao amin'ny Unicode Working Group, midika izany fa mpikambana mavitrika ao amin'ny Emoji Consortium.
Hanavao ity lahatsoratra ity amin'ny tsaho marobe kokoa isika rehefa manakaiky ny datin'ny famoahana iOS 13.
iPhone Hack: Ny mpanenjika dia afaka mahita ny mombamomba ny mombamomba azy, ny sary amin'ny sarintany nosakanana amin'ny alalana vaovao
Hanova SIM ny karatra SIM mba hampitombo ny haavo amin'ny Internet
Ahoana ny fomba ahafahana manova fahazoan-dalana roa amin'ny iPhone
Ny iPhone 6S dia mitranga: Ny fandidiana ny tsy fahombiazan'ny fiarovana tsy ara-dalàna
Ny New 'Live GIF' App nandefa sary mivantana ho an'ny GIFs
Ny fanesoana dia mampiseho ny iPhone 6s dia mangatsiaka kokoa noho izany - ary mahazo ny app iFixit miala amin'ny App Store
Ny iOS 10 dia ahafahan'ireo mpampiasa manala ny apps de préjudice efa napetraka
Apple dia mamoaka ny iOS 10.3 Beta 1, miaraka amina fiovana goavana
Tags:Apple Inc iOS iPhone Rafitra fikirakirana
Bing CentOS Ubuntu 14.04 rindrambaiko fitaovana HTTPS WordPress Linux Ubuntu Systems Unix Ubuntu USB Apps fifamoivoizana Cortana MAMAKA fitaovana bilaogy windows update File ram haino aman-jery sosialy Windows 8 Ubuntu 14.10 tahirin-kevitra Support Chrome Server Apache HTML Windows 10 fanamarinana web browser 04 Users Time raki-daza Plugins GNOME Phone Ubuntu 16 Linux Mint bilaogy Up " nbsp CentOS 7 SEO fikarohana Unité centrale command line Samsung Galaxy Command Google Apple Watch One ' app store Windows Phone famerenana YouTube SSD ubuntu 15.04 Rafitra fikirakirana Samsung finday avo lenta Android Fitaovana finday API Company Video lalao Debian lalao Toetoetra Twitter Malagasy Bible Performance Nginx fitaovana finday PPA SSH fitaovana famotsorana 10 afa-po OS X endri-javatra toe-tsaina paoma HTTP taona 'App Facebook web server Plugin Database iPhone "PC Linux MySQL Screen hametraka Firefox rafitra PHP takelaka fikirakirana IP adiresy PDG vaovao farany Microsoft Windows loharano misokatra Windows Microsoft